Maxaa Ka jira in La sumeeyay madaxwaynihii maamulka Oromada? – Xeernews24
Maxaa Ka jira in La sumeeyay madaxwaynihii maamulka Oromada?
Waxaa soo baxaya Xogo isa soo Taraya oo sheegaya in La sumeeyay madaxwaynihii maamulka Oromada Lema Megersa, kaasi oo mudo kabadan Laba Todobaad aan war iyo wacaal Toona laha Hayn Halka uu Jaan iyo cidhib dhigay.
Qaar-kamida Jaraa’idka Axmarada ayaa Qoray in lasumeeyay madaxwayne Lema oo ah shakhsiga ay Haatan ka Go’do Talada xisbiga EPRDF iyo Guud ahaan Itobiya, waxaana wargayska oo soo xiganaya ilo ka Ag-dhow warbaahinta dawlada uu kudoodayaa in sumayntaasi ay tahay mid xaqiiq ah.
Isha xogtani kasoo baxday ayaa sidoo kale sheegaysa in madaxwayne Lema dibada loola cararay kadib markii xaaladiisa caafimaad dalka Gudihiisa wax looga Qaban waayay, balse war maalinkii Arbacada lagu baahiyay shabakada Fana ee Afka dawlada kuhadasha, ayaa lagu sheegay in madaxwayne Lema iyo dhigiisa Axmarada ay booqosho kujoogaan dalka Holand taasi oo u muuqata mid lagu marin Habaabinayo xogaha isa soo Taraya.
In kaste oo si rasmi ah cid u xaqiijinaysaa aysan Jirin xaalada dhabta ah ee madaxwynihii Oromada oo in muda ah aan warkiisa lahayn, ayaa xogaha soo baxaya waxay sheegayaan in arinka sumayntiisa Farta loogu Fiiqiyo Kooxdii laga adkaaday ee TPLF oo u aragta Lema maskaxdii kadambaysay Guuldaradii kooxda TPLF iyo inuu wali yahay Halista kaliya ee kooxdaasi kusoo maqan.
Maqnaanashaha madaxwayne Lemaga Oromada ayaa si wayn looga Hadal hayaa baraha bulshada iyada oo shacabka Oromadu ay su’aalo aan Jawaabahooda wali lahelin iska waydiinayaan xaalada iyo Halka uu kusugan yahay madaxwayne Lema oo ah Hormuudka Guushii Taariikhiga ahayd ee Oromadu talada dalka Itobiya kula wareegtay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/12/0000alme1.jpg 296 590 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-02-02 09:18:562019-02-02 09:18:56Maxaa Ka jira in La sumeeyay madaxwaynihii maamulka Oromada?
Qorshaha magaalada Diridhaba u kala dagsadeen Oromo iyo Axmaaro!! Madaxweyne Cagjar Oo Sheegay In Hadhaagii Cabdi Iley Ka Dambeeyay Khilaafka...